यी गुण भएका पुरूष प्रेमकाे मामलामा सधैँ सफल | Makalukhabar.com
यी गुण भएका पुरूष प्रेमकाे मामलामा सधैँ सफल
असाेज १३ । प्रेम अपनत्वको भाव हो । “प्रेम” मजबूत स्नेहको एक भावना र व्यक्तिगत लगाव हो । विशेष प्रेम शब्द सुन्ने बित्तिकै माया मोह अनि जिन्दगी सम्झनेहरुको जमात मात्रै होइन, प्रेम शब्द सुन्नै नचाहनेहरु पनि कम छैनन् यहाँ ।
आजकल ब्रेकअफको सिलसिला धेरै सामान्य भइसकेको छ । तपाईकै सार्थी सर्कलमा पनि धेरै त्यस्ता व्यक्ति छन् , जसको एक वा एकभन्दा बढीसँग ब्रेकअफ भएको होस् । गर्लफ्रेन्ड–ब्वाईफ्रेण्डको ब्रेकअफ हुनु त सामान्य नै हो ।
सात जन्मको कसम खाए पछि पनि मानिसहरु सात महिना या सात वर्ष पनि साथ निभाउन मुश्किल मानिरहेका छन् । तर यस्तो किन ? एक पुरानो भनाइ छ, ‘मानिस प्रेममा अन्धो हुन्छ ।’ प्रेमका कारण मानिस सही र गलतजस्ता कुरालाई सम्झिन सक्दैन् र प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्छ । तर विवाहका लागि आवश्यक आधार भने बनाउ सक्दैन ।
यस्ता पुरुषहरु प्रेममा सधैं सफल हुन्छन्:
जो पुरुष सधैं स्त्रीलाई सम्मानको नजरबाट देख्छन् उनको महत्वलाई सम्झिछन् भने त्यस्ता पुरुषको सम्बन्ध कहिल्यै टुट्दैन ।
जो पुरुष आफ्नी प्रेमिका या पत्नीको अलावा कुनै पनि पराई स्त्रीप्रति आकर्षित हुँदैनन् , उनी आफ्नो सम्बन्धलाई जोगाउन हरेक अवस्थामा तयार हुन्छन् ।
जो पति या प्रेमी आफ्नो साथीलाई सुरक्षाको महशुष गराउँछन् उनीहरु प्रेमको मामलामा कहिल्यै हार्दैनन् । यदि तपाई उनीसँग सुरक्षात्मक व्यवहार गर्नुहुन्छ भने उनी निश्चिन्त भएर तपाईको साथमा रहनेछिन् ।
जो पुरुषले भौतिक र भावनात्मक शुखसँगै आफ्नो जीवनसाथीलाई शारीरिक सुख र सन्तुष्टि प्रदान गर्छन्, उनकी पत्नी तथा प्रेमिका सधैं पसन्न रहन्छिन् । एजेन्सी
सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि घट्यो
यसरी आफ्नो किचनलाई सुन्दर र सफा बनाउँनुहोस्
फागुन ५ । स्वस्थ खाना तयार गर्न भान्छाको सफाइ पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । मुख्यतः खाना तयार गर्न भान्छामा प्रयोग हुने भाँडाकुडा र अन्य सरसामानको नियमित सफाइ गर्नुपर्छ ।त्यसबाट विभिन्न रोगको सङ्क्रमणसमेत हुन सक्छ । स्वस्थ खाना तयार गर्न भान्छाको सफाइ पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । मुख्यतः खाना तयार गर्न भान्छामा... जारी राख्नुहोस...
जब अपाङ्ग छोरा जन्मेको भन्दै जंगलमा लगेर छोडिदिए...
फागुन ३ । ४७ वर्षका अर्जुन बहादुर राई र २९ वर्षकी नन्दी ओली शारीरिकरुपमा अपाङ्ग छन् । तर दुवैको प्रेमिल जोडी र प्रेम भावको बारेमा धेरैको मुखबाट प्रसंशा सुन्न पाईन्छ । अर्जुन संखुवासभामा जन्मेका हु्न भने नन्दी रोल्पामा जन्मेकी हुन् । उनीहरु वैवाहिक वन्धनमा बाँधिएको तीन वर्ष भयो । ९ महिनाकी एउटी छोरी... जारी राख्नुहोस...
कोरोना नियन्त्रणको लागि नेपालमै पत्ता लाग्यो आयुर्वेदिक–जडीबुटी
फागुन ३, काठमाडौं । आयुर्वेदिक–जडीबुटी अन्वेषक योगी धर्म महारस (धर्मराज पौडेल) ले आफूले कोरोना भाईरसको औषधी (आयुर्वेदिक) पत्ता लगाएको बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूले जीवनको ४८ वर्षदेखि आयुर्वेदिक–जडीबुटीसम्बन्धी खोज तथा अनुशन्धान गरेको बताउँदै चीनबाट फैलि... जारी राख्नुहोस...
आज ‘भ्यालेन्टाइन डे’, यसरी यादगार बनाउनुहोस्
फागुन २ । आज भ्यालेन्टाइन डे का दिन आफ्नो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन हर कोही जोडी चाहन्छन् । विवाहित हुन् वा अविवाहित हुन् सबैले भ्यालेन्टाइन डे का दिन आफ्नो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन एक अर्कालाई सरप्राइज दिने, उपहार दिने लगायतका काम गर्ने गर्छन् । भ्यालेन्टाइन डेका दिनलाई मनोरञ्जनपूर्वक र यादगार बना... जारी राख्नुहोस...
प्रेममा पर्दा यसरी पुग्छ स्वास्थ्यमा फाइदा
फागुन २, काठमाडौं । आज फेब्रुअरी १४ अर्थात् प्रणय दिवस । आजको दिनलाई माया गर्ने जोडिहरुले विशेष दिनका रुपमा लिने गर्छन् भने, कतिले आजको दिन आफुले माया गर्ने वा मन पराएका व्यक्तिलाई आफ्नो भावना व्यक्त पनि गर्छन् । माया गर्नु, प्रेम गर्नु भनेको आफैँमा अनौठो र मिठो अनुभूति हो, जसको अनुभव माया गर्नेलाई... जारी राख्नुहोस...
आज फेब्रुअरी १४ : ‘भ्यालेन्टाइन डे’, प्रेमसम्बन्ध प्रगाढ बनाउने अवसर
फागुन २, काठमाडौं । आज फेब्रुअरी १४, 'भ्यालेन्टाइन डे' अर्थात् प्रणय दिवस । पछिल्लो सयम नेपालमा यो प्रेम (प्रणय) दिवसका रूपमा परिचित हुँदै गएको छ । पश्चिमी संस्कृति भए पनि करिब डेढ दशकयता यसलाई नेपालका सहरहरूमा राम्रैसँग मनाउन थालिएको छ, खासगरी युवा पुस्ताले ।युवापुस्ताले फेबु्रअरी १४ ‘भ्यालेन्टाइन... जारी राख्नुहोस...
यस कारण महिलाहरु पाको उमेरका पुरुषप्रति आकर्षित
फागुन १ । हरेक महिला आफ्नो पार्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खाल को होस् भन्ने चाहान्छन त्यसैले महिलाहरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुषलाई मन पराउने गर्दछन तर कोहि महिला भने बिहे भएको पुरुषलाई मन पराउने गर्दछन् कारण यस्ताे छ ।हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै... जारी राख्नुहोस...
‘भ्यालेन्टाइन डे’ लाई स्पेशल बनाउने केही टिप्स
माघ २७। नजिकिँदै गरेको १४ फेब्रुअरी अर्थात ‘भ्यालेन्टाइन डे’ विश्वभर आपसमा प्रेम–सद्भाव साटासाट गरी मनाइँदैछ । यस प्रणय दिवसको अवसरमा आ–आफ्ना प्रेमी–प्रेमिकालाई विभिन्न उपहार प्रदान गरी प्रेम–सद्भाव साटासाट गर्ने प्रचलन रहेको छ ।विशेषगरी यस दिवसमा गुलाफको फूल उपहार दिएर प्रेम आदान प्रदान गर्ने गरिएक... जारी राख्नुहोस...
ज्योतिष शास्त्र अनुसार यस्ता छन् डिभोर्स हुनुको कारणहरु
माघ २६, काठमाडौं । हरेक श्रीमानले आफ्नो श्रीमती सुन्दर र राम्रो होस् भन्ने सोच्छन् । तर के यो सम्भव छ त ? ज्योतिष शास्त्रका अनुसार जन्म कुण्डलीमा शुक्र सप्तम स्थानमा भयो भने यो कुरा सम्भव रहेको छ ।शुक्र ग्रह विवाहका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण ग्रह हो । यदि कसैको पनि कुण्डलीमा शुक्र कमजोर छ भने त्यसको... जारी राख्नुहोस...
भ्यालेन्टाईन डे संस्कृतिकाे नाममा माैलाउँदाे विक्रिति
मान्छे अरू प्राणीभन्दा चेतनशील सामाजिक प्राणी हो । त्यही भएको कारण मान्छेले प्रेम र घृणा, आवेग र विवेक, ब्यक्तिगत चाह र सामाजिक नियम सबै विपरितहरूको अस्तित्वलाई गतिशील सन्तुलन मिलाउँदै अगाडि बढ्दछ । यो सन्तुलन मिलाउने सामर्थ्य मानवबाहेक अरू कुनै पनि प्राणीहरूसँग छैन ।निश्चय नै मान्छे एउटा ब्यक्ति पन... जारी राख्नुहोस...